सर्वोच्च अदालतको अख्तियारलाई प्रश्न – बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई किन मुद्दा नचलाएको? – Weekly Nepal
सर्वोच्च अदालतको अख्तियारलाई प्रश्न – बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई किन मुद्दा नचलाएको?
in विविध — २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १७:२४
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई माथि मुद्दा नचलाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जवाफ माग गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले पन्ध्र दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री निवास समेत रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरि व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको विषयमा अख्तियारले दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थिएन। तर मन्त्रिपरिषद्मा जग्गाबारे प्रस्ताव लगेका चार मन्त्री विरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो।
‘अख्तियारले नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ। तर त्यो नीतिगत निर्णय होइन कानुन विपरीतको निर्णय हो त्यसैले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन निर्णय गर्ने दुवै मन्त्रीमण्डलमा संलग्न सबैलाई मुद्दा चलाउन आदेश माग्दै न्यौंपानले आफ्नो रिटमा माग गरेका थिए।
नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ।